sm3 ကနေ အခမဲ့ ဖြန့်ဝေတဲ့ Java အထောက်အပံ့ပေးတဲ့ Mobile Phone များမှာ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ sm3 Mobile Directory လေးပါ... ရန်ကုန်မြို့ရှိ Wedding Services, Vehicle Services, Transport & Tourism Services, Restaurant & Catering Services, Mobile Phone & Accessories, Market & Shopping Centers, Hotels, Health & Medicare Centers, Entertainments & Recreations, Home Delivery & On-Call Services, Computer & Accessories, Banks & Finance Centers ဖုန်းနံပါတ်များ၊ လိပ်စာများနှင့် အရေးကြီး ဌာန ဖုန်းနံပါတ်များပါဝင်ပါတယ်... sm3 Mobile Directory ကို အောက်မှာ download လုပ်ယူနိုင်ပါတယ်... sm3_Mobile_Directory2009.zip ထဲမှာ ဖိုင် ၂-ဖိုင်ပါဝင်ပြီး sm3MobileDirectory.jar ဖိုင်ကို mobile phone များတွင် install လုပ်ကာ အသုံးပြုနိုင်ပြီး sm3MobileDriectory_Share.jar ကတော့ mobile phone တွင် install လုပ်ပြီးပါက အခြား ဖုန်းများသို့ bluetooth မှတဆင့် m3 Mobile Directory ကို install ပြုလုပ်ပေးနိုင်ကြောင်း သိရပါသည်...Download sm3 mobile Director ၊ Download Multiupload ၊ Download mediafire ၊ Download Sling ၊ Download ifile.itRefer : ကိုမောင်လှ
ကျွန်တော် ဒီဆိုက်ရဲ့ ကိုယ်စားပြု logo လေးတစ်ခု လုပ်ထားတယ်ဗျာ . အဆင်ပြေ ကြလားတော့ မသိဘူး . အဆင်မပြေရင်လဲ ပြန်ပြီးတော့ အကြံဥာဏ်များ ပေးနိုင်ပါတယ် . အခု ur installer ပုံရဲ့အပေါ်မှာ တွေ့မယ်ထင်တယ် . စမ်းပြီးတော့ ထည့်ကြည့် လိုက်တာ . နောက်ပိုင်း pdf ebooks တွေမှာ ဒီဆိုက်ရဲ့ ကိုယ်စား အဲ့ဒီ့ ပုံလေးတွေကို ထည့်မှာပါ .your uninstaller လေးက တင်ထားပြီးသား ဘယ် program ကို မဆို ဖြုတ်ပစ်ဖို့အတွက်ပါ . အရင်က အသေးစိတ် ရေးပေးထား ပါတယ် . Download ifile.it ၊ Download Mediafire ၊ Download multiupload
ကိုညီနေမင်း ခင်ဗျာ :: http://www.softheap.com/ ကထုတ်တဲ့ Easy Disk Drive Safeguard version 3.3 ရဲ့ Crack, Keygen, Serial တစ်ခုခုကို ကူညီပြီးတော့ ရှာပေးပါခင်ဗျာ …… Disk Drive Security v2.0 ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ် အထဲမှာ serial number ပါပါတယ် . အဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် . အောက်မှာ အဆင်ပြေတဲ့ Link ကနေသာ Download လုပ်ပါ . Download mediafire ၊ Download Multiupload
ကဲ ဒါကတော့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ မျက်နှာနှင့် ခေါင်းကို အစားထိုးလိုက်ရုံပါပဲ . အဆင်သင့်လုပ်ထားတဲ့ ကုတ်အိကျီပါ . ကျွန်တော့် မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်က ကျွန်တော့်ညီ ဖြိုးယံလေး တင်ပေးထားတာကို ပြန်ပြီးတော့ share ပြန်ခွဲပေးတာပါ . အောက်မှာ ပုံစံလေးတွေနဲ့ ပြထားပါတယ် . အဆင်ပြေသလိုသာ Download လုပ်ကြပါ . ပုံတွေက နဲနဲများတော့ စာသိပ်မရေးတော့ဘူး မဟုတ်ရင် ရှည်သွားမယ် . ကိုလိုချင်တဲ့ ပုံကို လိုက်ကြည့်ပြီး ကြိုက်တာနဲ့ သူ့ဘေးကရှိတဲ့ Downlaod ကို နှိပ်လိုက်ပါ . ဒါကတော့ နယ်က ဓါတ်ပုံပြင်တဲ့ ညီအစ်ကိုများ ကုတ်အိကျီ အခက်အခဲရှိနေပြီး ကုတ်အိကျီနှင့် passport ပုံများ ထုတ်ချင်သူများအတွက်ပါ . Download လုပ်တဲ့သူများ ဖိုင်ဆိုက် အခက်အခဲဖြစ်မှာ စိုးလို့ ကျွန်တော် တစ်ပုံကို တစ်ဖိုင်စီ တင်ပေးထားပါတယ် . Download Multiupload ၊ Download mediafire Download Multiupload ၊ Download mediafire Download Multiupload ၊ Download mediafire
နောင်ရိုး : အစ်ကို ရေ ကျွန်တော့် internet cafe ကို သွားသုံးတဲ့အခါတိုင်း cookies တွေကို ဖျက်ဖျက်ပစ်တယ် ဒါပေမယ့် စိတ်ထဲမှာ မကြေနပ်နိုင်ဘူး ဖြစ်နေတယ် . cookies တွေ မကျန်ခဲ့အောင် ဖျက်ပစ်ခဲ့ဖို့အတွက် သူ့အတွက် သီးသန့် လုပ်ထားတဲ့ program လေးများ မရှိဘူးလား ရှိရင် ကူညီစေချင်ပါတယ် . ကိုနောင်ရိုးရေ တင်ပေးလိုက်ပါပြီ . အဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် . ဒါကတော့ IE အတွက်ကော Firefox ချစ်သူများအတွက်ပါ နှစ်ခုစလုံးအတွက် ပါပါတယ် .
Browser တစ်ခုလုံးက cookies တွေကို ဖျက်ပစ်ချင်လျှင်တော့ IE (or) Firefox ကို ရွေးပြီး Delete cookes ကို ရွေးပေးပြီး ဖျက်လို့ရသလို မိမိသုံးခဲ့တဲ့ ၀ဘ်ဆိုက်က cookies ကိုပဲ ဖျက်ချင်လဲ ရပါတယ် .
မိမိသုံးခဲ့တဲ့ ဆိုက် တစ်ခုတည်းကို ဖျက်ချင်တယ် ဆိုရင်တော့ မိမိသုံးပြီးတာနဲ့ ကိုသုံးခဲ့တဲ့ Browser ကို ပထမရွေးပါ ပြီးလျှင် ဥပမာ- မိမိက gmail တစ်ခုတည်းကို သုံးခဲ့တယ် ဆိုရင်. website address နေရာမှာ http://www.gmail.com ဆိုပြီး ရိုက်ထည့်ပြီး Delete cookies ကို နှိပ်ပေးလိုက် . မိမိသုံးခဲ့တဲ့ (မိမိဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့) အချက်အလက်တွေ မကျန်ခဲ့နိုင်တော့ပါဘူး .
စမ်းကြည့်လိုက်ပါဦး . အောက်မှာ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် . စာလုံးအနီရောင်နဲ့ က ဥပမာပေးထားတာပါ . အဲ့ဒီ့နေရာမှာ မိမိဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ လိပ်စာကိုထည့်ရမှာပါ . Download mediafire
ဒါကတော့ နောက်ဆုံးထွက် version အသစ်ပါ . အားလုံးပဲ အဆင်ပြေ ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် . printer တိုင်း အတွက်တော့ resetter မရှိပါဘူး . အခုနောက်ထွက်တဲ့ version တွေဆိုရင်တော့ သုံးရတာလဲ အဆင်ပြေသလို resetter မရှိရင်လဲ cartridge ၀ယ်ရင် တစ်ခါတည်း auto resetter ပါပြီးသားဆိုတော့ အဆင်ပြေပါတယ် . - support for R270- support for R240- support for R340- support for CX2800- support for CX3900- support for CX4900- support for CX5900- support for C58/C59- support for RX640- improved support for C2100/2200- improved support for RX700- improved support for R2400- improved support for 785EPX/825/895/915Download ifile.it ၊ Download mediafire
ဒါက မရိုးနိုင်အောင်လို့ နောက်ထပ် တစ်မျိုးပါ . တစ်ခုနဲ့ အဆင်မပြေရင် နောက်တစ်ခုနဲ့သာ Download လုပ်ပါဗျာ . Download ifile.it ၊ Download mediafire
ဒါလေးကလဲ rapidshare file တွေကို Download လုပ်ဖို့ အတွက် 2009 ခုနှစ် ထုတ်လေးပါ . အဆင်ပြေပါတယ် . အတော်လေးကို ကောင်းပါတယ် . စမ်းကြည့်လိုက်ပါဦး . သုံးနည်းကတော့ လွယ်ပါတယ် . စမ်းကြည့်လိုက်ပါ . လိုချင်ရင် အောက်မှာ Download လုပ်လိုက်ပါ .Download ifile.it ၊ Download mediafire
ဒါကတော့ latest version လေးပါ . လိုချင်ရင် အောက်မှာ Download လုပ်လိုက်ပါ . rapidshare Downloader များက ဘာကို စွမ်းဆောင်ပေးလဲ ဆိုရင်တော့ မိမိ Download လုပ်ချင်တဲ့ rapidshare file တွေရဲ့ Download Link တွေကိုသာ ထည့်ထားလိုက် . တစ်ခုပြီးတာနဲ့ တစ်ခုကို ဆက်တိုက် သူ့ဟာနဲ့သူ Download လုပ်နေပါလိမ့်မယ် . တစ်ချို့တွေရှိပါတယ် . ရန်ကုန်မှာ အဖြစ်များတယ် . internet line တစ်ခုတည်းကို share ခွဲပြီးတော့ ပေးထားတယ် . အဲ့ဒီ့ အင်တာနက်လိုင်းက တစ်လိုင်းတည်း ဖြစ်တဲ့အတွက် အဲ့ဒီ့လိုင်းကိုသုံးတဲ့သူ မှန်သမျှထဲက တစ်ယောက်ကသာ rapidshare ကို Download လုပ်မယ်ဆိုရင် တစ်ခြားသူက Download လုပ်လို့မရတော့ဘူး . တစ်ခါ အဲ့ဒီ့လူက rapidshare Downloader ကိုသုံးထားမယ် ဆိုရင်ပိုဆိုးသေး . တစ်ခုပြီးတော့ တစ်ခုကို ဆက်တိုက် Download လုပ်နေတာ . ကိုက Download လုပ်မယ်ဆိုတိုင်း . သင့် ip ဟာ Download လုပ်ပြီးသွားပြီ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဘယ်နှစ်မိနစ် စောင့်ပါ ဆိုတာမျိုးနဲ့ ချည်းပဲ တိုးနေလိမ့်မယ် . အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ တစ်ခြားတစ်ယောက်က ကိုနဲ့အတူတူ rapidshare ဆိုက်ကနေ Free user အနေနဲ့ Download လုပ်နေပြီ ဆိုတာ သေချာပါတယ် .Downlaod ifile.it ၊ Download mediafire
ဒီ အထဲမှာတော့ Rapidshare ကနေ Download လုပ်တဲ့ Tools 14 ခုပါပါတယ် . အဆင်ပြေတဲ့ တစ်ခုနဲ့သာ Download လုပ်ကြည့်ပါ . Rapidshare ကနေ Download လုပ်ဖို့ကတော့ Downloader တွေ အတော်များတယ်ဗျ . ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ . လိုချင်တာ အတော်များများ File တွေက rapidshare ကနေ တင်ထားတာ ဖြစ်လို့လေ . ကဲအောက်မှာ အထဲမှာပါတဲ့ Rapidshare Downloader အမျိုးအစား 14 မျိုးပါ . RapidShare Leecher 2007 2.0Rapidshare Auto Downloader 3.7.1Rapidshare Queuer 2.2Rapidshare Search Tool 2.3RapidShare Downloader 1.4Rapidshare Mass Downloader 1.0FreeRapid Downloader 0.83 Build 522RapidBIT 1.2RapidAssist 1.0.0RapidWareX 1.2.1RapidZuca 1.1RSDownloader 2.3Rapget.RS 1.0.4.1Rapid Media Server 0.5.5.0Download ifile.it ၊ Download mediafire
အာကာဖြိုး : အကိုပေးလိုက်တဲ့ hidden ဖေါ်တဲ့ ဆော့ဝဲလ်က အဆင်မပြေ သေးလို့်ပါ အကို ကျွန်တော် စမ်းပြီးပါပြီိ ကျွန်တော် အကို မြင်ရအောင် လို့ပါ ဓာတ်ပုံပါ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ပြန်ဖော်လို့မရ သေးပါဘူးအကိုရေ ဓတ်ပုံကြည့်ပြီး ပြန်ဖြေပေးပါအုံးနော် ကိုက်တဲ့ အကောင်ကတော့ worn32 fancy ပါအကို သူသေသွားတော့ folder option ထဲက show hidden file and folder and show hide system file and folder ကိုဖြုတ်မှ ပြန်ပေါ်ပါတယ် နှစ်ခုလုံးဖြုတ်မှ ပြန်ပေါ်တာပါ တခုထဲ ဖြုတ်တောင် မပေါ်ပါဘူး အကို ...
(၁) virus ကြောင့် Tools တွေ ပျောက်ဆုံးနေရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ
ပထမဦးဆုံး မသိသေးတဲ့ သူများအတွက်ကိုပါ တစ်ခါတည်း ပြောပြချင်တာပါ . ဆိုက်မှာ အရင်ကတည်းက စာဖတ်မိတ်ဆွေတွေတော့ အဲ့ဒီ့ tools ကိုသိကြမှာပါ . ဒါက မသိသေးတဲ့ သူတွေအတွက်ပါ .
virus ကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ချို့ ယွင်းချက် (၁၀)ချက်ကို ပြန်ပြုပြင် ပေးနိုင်တဲ့ Tool ကို ဒီပို့စ်မှာ တင်ထားပေးပါတယ် . အဲ့ဒီ့ tool လေးကတော့ လူတိုင်းမှာ ရှိထားသင့်ပါတယ် . နံပါတ်(၁)အတွက် အဲ့ဒီ့ပို့စ်နဲ့ ဖြေရှင်းလိုက်ပါ .
အပေါ်က ပို့စ်နဲ့ အခု ငါ့ညီ ဖြစ်တာနဲ့ တော့မဆိုင်ပါဘူး . ဒါပေမယ့် အားလုံး သိသွားအောင်လို့ ပြန်ပြီး ညွှန်းပေး လိုက်တာပါ .
(၂) HDD ကို Double click နှိပ်မရရင် ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ?
တစ်ခြားသူများလဲ C: နှင့် D: ကို double click လုပ်မရတာမျိုး ကြုံဖူးမှာပါ . အဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလဲဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ သုံးနေတဲ့ HDD ထဲက hidden file လုပ်ထားတဲ့ autorun ဖိုင် ကို virus က တိုက်ခိုက်ထားတာ ခံနေရတဲ့အတွက် Double click လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ... Open နဲ့ ဖွင့်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် လုံးဝမရပါဘူး . အဲ့တော့ ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ဆိုရင် အခုကျွန်တော် ပေးထားတဲ့ software ကို Download လုပ်ပါ . Explorer xp ကို run စရာမလိုပါဘူး . (၃) virus ကြောင့် ဖြစ်နေတဲ့ Hidden file တွေကို ဘယ်လိုယူမလဲ နံပါတ်(၂) နဲ့ နံပါတ်(၃) အတွက် ပထမဦးဆုံး အောက်က program ကို အရင် Download လုပ်လိုက်ပါ . လုပ်ပြီးပြီဆိုရင် ဒီပို့စ် ထဲက အတိုင်း လုပ်လိုက်ပါ . ငါ့ညီရဲ့ ပျောက်နေတယ်ဆိုတဲ့ ဖိုင်တွေကို အကုန်လုံးပြန်ရပါလိမ့်မယ် . အဆင်ပြေပါစေငါ့ညီ .
ကဲအောက်မှာ Download လုပ်လိုက်ပါဦး ..
Megaupload, Megashares, Netload, Hotfile, Easy-Share, Uploading, Megavideo, အစရှိသည့် file sharing site များမှ Premium User များနည်းတူ အလွယ်တကူ download လုပ်ယူနည်းလေးပါ . ညီလေး တစ်ယောက် မေးလ်နဲ့ ပို့လိုက်တာပါ . ညီလေးကိုလဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် . premium account မရှိလို့စိတ်ညစ်နေသူများ ယခုအချိန်က စပြီး premium account user များကဲ့သို့ file များကို အကန့် အသတ်မရှိ၊ resume support လုပ်ပေးနိုင်မည့် နည်းလမ်းလေး ဖြစ်ပါတယ်..http://public.rapidpremium.net/ ကိုဝင်ပါ၊ "username" နဲ့ "password" နေရာတွင် "public" ကိုရိုက်ထည့် ပေးပြီး enter ခေါက်ပါ။download ကို click လုပ်ပါ ..ပေါ်လာသည့် Box ထဲမှာ မိမိ Download လုပ်မည့် download link ကိုထည့်ပါdownload ကို click လုပ်ပါ၊ ထို box ထဲတွင် download လုပ်ဖို့အတွက် link အသစ်ပေါ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ထို download link အသစ် ကိုယူပြီး download လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် ...အားလုံးပဲ အဆင်ပြေကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် .
အခုလုပ်ပြမည့် အသဲကတော့ ဒဏ်ရာရလို့ ပတ်တီးစည်းထားရတယ် . ကဲ အောက်မှာ လုပ်နည်းကို ကြည့်လုက်ပါ . . ဒီအသည်းကို ကျောက်ပတ်တီး စည်းထားရတဲ့ အသည်းလို့ နာမည်ပေးလိုက်တယ် . အဟဟအသဲပုံကို ရှာလိုက်ပါ . အသဲမရှိရင် ဒီမှာ Download လုပ်ယူလိုက်ပါ .ကဲ (ပုံ-၁)ကလို photoshop နဲ့ ဖွင့်လိုက်ပါ . background layer color ကို အဖြူထားပေးလိုက်ပါ .ပြီးရင် ပုံကို select ပေးထားပြီး (ပုံ-၂) ကလို Edit >> Mode >> Grayscale ကို ရွေးလိုက်ပါ .ရွေးတဲ့အခါမှာ (ပုံ-၃) ကလို layer ရောမှာလားမေးရင် no ကိုပေးလိုက်ပါ .ပြီးရင် (ပုံ-၄) မှာလိုမျိုး Image >> Adjustments >> brightness/Contrastcolour ကို ရွေးပြီး (ပုံ-၅) မှာလို နဲနဲလေး နက်လာအောင် ပြန်ချိန်ပေးလိုက်ပါ . ပြီးရင် (ပုံ-၆) မှာလို Edit >> Define Brush present ကို နှိပ်လိုက်ပါ . ပြီးရင် (ပုံ-၇) မှာလို Brush(b) ကိုရွေးပြီးတော့ right click ထောက်ပြီး brush ကို ကြည့်လိုက်ရင် ဟိုးနောက်ဆုံးမှာ အရင်ကလိုပဲ ကိုပေးထားတဲ့ နာမည်နဲ့ bursh အသစ်တစ်ခုတိုးနေတာကို တွေ့ရမှာပါ .အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဖြင့် ဟော (ပုံ-၈) မှာလိုမျိုး အသဲများရင် များသလို ရောင်စုံဒဏ်ရာရနေတဲ့ အသဲတွေကို ဖန်တီးလို့ ရသွားပြီပေါ့ .
ကဲ ဒီတစ်ခါတော့ ကျွန်တော် ရိုးရိုးဓါတ်ပုံတစ်ပုံကို brush တစ်ခု ဖြစ်အောင် ဘယ်လိုဖန်တီးယူမလဲ ဆိုတာကို ပြောပြပါ့မယ် . photoshop အသုံးပြုတဲ့လူတွေ ကတော့ brush အသုံးပြုနည်းကို သိလောက်ပြီလို့ ထင်ပါတယ် . နှစ်မျိုး ပြောပြပါ့မယ် . ဒါပေမယ့် သဘောတရား ချင်းက အတူတူပါပဲ . (၁) font ကို ဘယ်လို brush ဖြစ်အောင်လုပ်မလဲ(၂) ဓါတ်ပုံကို ဘယ်လို brush ဖြစ်အောင်လုပ်မလဲ ကဲနံပါတ်(၁) Font ကို photoshop brush ဖြစ်အောင် လုပ်နည်းကို စကြည့်ရအောင်photoshop ကို ဖွင့်ပါ .မိမိလုပ်ချင်တဲ့ font ပုံစံကို လိုက်ရှာပါ .(ပုံ-၁) (ကျွန်တော်ကတော့ မြန်မာပြည်မြေပုံကို ရွေးလိုက်ပါတယ်)ရပြီဆိုတာနဲ့ ပုံ (၂) မှာ ပြထားသလို photoshop ပေါ်ကို မှာ ခေါ်တင်လိုက်ပါ . ပြီးတော့ font colour ကို အမဲရောင်ကိုပဲ ရွေးလိုက်ပါ . နက်လေ ပိုကောင်းလေပါပဲ .(ပုံ-၃) မှာလိုမျိုး create new layer ကိုနှိပ်ပြီး layer အသစ်တစ်ခု ဖန်တီးယူလိုက်ပါ .(ပုံ-၄) လို layar2ကို shif ခံပြီး layer နှစ်ခုစလုံးကို select ပေးလိုက်ပြီး (ctrl + e) ကို နှိပ်လိုက်ပါ .(ပုံ-၅) မှာလို layer နှစ်ခုပေါင်းသွားပါလိမ့်မယ်ဒီအထိရပြီနော် . ဒါဆိုရင် ပုံ(-၆) မှာလို Edit >> Define Brush present ကို နှိပ်လိုက်ပါ .ဒါဆိုရင် (ပုံ-၇) မှာလိုမျိုး Brush name တောင်းတဲ့ box ပေါ်လာပါလိမ့်မယ် . ကျွန်တော်ကတော့ အခု brush name ကို nyinaymin လို့ပေးလိုက်ပါ . စာဖတ်သူများလဲ အဆင်ပြေတဲ့ နာမည်ပေးလိုက်ပါ . ပြီးရင် ok ကိုပေးလိုက်ပါ .(ပုံ-၈) မှာလို brush tool ကို ရွေးလိုက်ပါ .(ပုံ-၉) မှာလို right click ထောက်ပြီးတော့ brush tools တွေကို လိုက်ကြည့်လိုက်ပါ . ဟိုးနောက်ဆုံးမှာ nyinaymin ဆိုတဲ့ brush လေးတစ်ခု တိုးနေတာကို တွေ့ရမှာပါ ဒါဆိုရင် ပုံ(၁၀) မှာလို ကိုလိုချင်တဲ့ အရွယ်အစားအတိုင်း brush တွေကို လိုသလောက် ဆွဲလို့ရပြီပေါ့ .
လိုအပ်တဲ့သူများ အောက်မှာ Download လုပ်ယူလိုက်ပါ . ifile.it နဲ့ mediafire ကနေ တင်ထားပေးပါတယ် .Download ifile.it ၊ Download mediafire
Download ကို အောက်မှာ နှစ်နေရာကနေ တင်ထား ပေးပါတယ် . အဆင်ပြေတဲ့ လင့်ကသာ Download လုပ်ကြပါ . ဒါကတော့ ၀ဘ်ဆိုက်တွေ ပြင်နေတဲ့အချိန်မျိုးနဲ့ တစ်ခြား တစ်စုံ တစ်ရာပြင်ဆင်မှု ပြုတဲ့အချိန်မှာ သုံးတဲ့ သင်္ကေတတွေပါ .Download ifile.it ၊ Download mediafire
အောက်မှာ Download လုပ်လိုက်ပါ .Download ifile.it ၊ Download mediafire
ဒီနေ့တော့ icon တွေကိုပဲ တင်ပေးလိုက်တယ် . brush တွေကိုလဲ တင်ပေးဖို့ရှိသေးတယ် . တစ်ကယ့်ကို အကောင်းဆုံး brush တွေကို စုထားတယ် . 2009 ခုနှစ် ထွက်သမျှ brush တွေကို . အခုတော့ icon လေးတွေကို Download လုပ်လိုက်ပါဦး . Download ifile.it ၊ Download mediafire
လာပြန်ပြီလို့ မလုပ်နဲ့ဦး . ဒါက အရင် icon နဲ့မတူဘူး . 3D icon တွေ . 3D ပုံစံကြိုက်သူများအတွက် . သဘောကျတယ်ဆိုရင် ထုံးစံအတိုင်းပေါ့ .Download ifile.it ၊ Download mediafire
ကဲ ဒါကတော့ loading time ကြာမြင့်တဲ့အချိန်မှာ ဒီတိုင်း ငုတ်တုတ်ထိုင်နေရတာ ထက်စာရင် animation ပုံစံလေးနဲ့ဆိုတော့ စောင့်ရတာ စိတ်သက်သာတာပေါ့ . အဲ့လို loading ကိုပုံစံအမျိုးမျိုးနှင့် တင်ထားပေးပါတယ် . တစ်ကယ့်ကို special animation တွေပါပဲ . Download ifile.it ၊ Download mediafire
ဘယ်နေရာမှာ သုံးတယ်ဆိုတာတော့ ပြောဖို့ကို မလိုတော့ဘူးလို့ ထင်တာပဲ . လိုတယ်ဆိုလဲ ထပ်ပြောလိုက်ပါတယ် . ဘလောဂ်ရဲ့ မြှားတွေ၊ နဲ့ တစ်ခြား ဒီဇိုင်းတွေမှာ ပုံလှလှလေးတွေ ထည့်ချင်တယ် ဆိုရင် အစားထိုးထည့်လို့ရအောင် အဆင်သင့်လုပ်ထားပြီးသား လက်ရွေးစင် icon တွေကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ် . ဘလောဂ်ကို အတော်အသင့် နားလည်တဲ့သူတွေ၊ photoshop ကို အသုံးပြုတတ်တဲ့ သူတွေဆိုရင်တော့ icon ကို ဘယ်နေရာမှာ သုံးရတယ်ဆိုတာ ပြောစရာမလိုလောက်ပါဘူး . အခုဒီထဲမှာ .ico နဲ့ .png နှစ်ခုစလုံး ပေါင်းထည့်ထားတယ် . Download ifile.it ၊ Download mediafire
သူသူ "HP Deskjet F300 Series InkJet Printer Resetter လေး လိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ရရင် တင်ပေးပါဦးနော်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။"printer ၀ယ်သုံးချင်သူများကို သတိပေးချင်တာကတော့ . ဘယ်တော့မှ all in one series ကို မသုံးပါနဲ့ . ကိုကတော့ all in one ဆိုတာနဲ့ printer တစ်လုံးကို ၀ယ်လိုက်တာနဲ့ scanner, copy, print out စတာတွေအားလုံးကို ရမယ် ဆိုတာနဲ့ ၀ယ်လိုက်ရေ . ၀ယ်တုံးကတော့ all in one ကွ ပေါ့ မကြာပါဘူး ပြဿနာက စပြီ . ဓါတ်ပုံတစ်ပုံကို ဖတ်လိုက်ရင် ၀ါးတားတားဖြစ်ရတာနဲ့ copy ကူးရင် black and white ကိုကူးပါတယ်ဆို အပြာရောင်လိုလိုထွက်လာရတာနဲ့ . မျိုးစုံ တစ်ခုပြီးတစ်ခု ပြဿနာ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ် . f-300 ရဲ့ ဒုက္ခပေးမှုလေးကို ပြောပြပါ့မယ် . သူအဓိက ပေးတဲ့ဒုက္ခက auto restetter ပါတဲ့ ink cartridges ကို ၀ယ်ပြီးတော့ ထည့်လဲထည့်လိုက်ရော တစ်ချို့ printer တွေမှာ အဆင်ပြေပေမယ့် . တော်တော်များများက4ရောင်ရှိတဲ့အထဲက တစ်ရောင် အမြဲလွတ်နေတတ်တယ် . အိုကေသွားပြီပဲထား ထုတ်လို့ပြုလို့ အဆင်ပြေနေတယ် . နောက်ထပ်တစ်ခု ထပ်လာတယ် ဘာလဲဆိုတော့ ဆေးသိပ်မလိုက်တာ . printer ink တွေရဲ့ 80% မှာ ဆေးရည်အမဲရောင်ဟာ အခဲမြန်တယ်ဗျ . သတိထားမိမလားမသိဘူး . နောက်တစ်ခုက ကိုက printer ဆေးမလိုက်လို့ head cleaning လုပ်လိုက်ပြန်ရင်လဲ ဆေးက nozzle မှာ ဆေးခဲပြီး ပိတ်နေတဲ့အခါ ဆေးရည်က over ဖြစ်ပြီးတော့ printer အတွင်းထဲမှာ ဆေးတွေ လျှံကျသွားရော . အဲ့ဒီ့နေရာမှာတော့ epson က သာတယ် . အခုနောက်ထွက်တွေမှန်သမျှ ink over အတွက် ပိုက်တစ်ခု နောက်မှာပါတယ် . cleaning လုပ်လိုက်လို့ over ဖြစ်သွားရင် အဲ့ဒီ့မင်က ပိုက်ထဲကနေ အပြင်ကိုဆင်းသွားတယ် .အဲ့တော့ ကိုက laserjet ကို မသုံးနိုင်လို့ ink jet ကိုသုံးမယ်ဆိုရင် မင်အမဲရောင်ကို တစ်လတစ်ကြိမ်လောက် စစ်ဆေးပေးပါ . လှုပ်ကြည့်လိုက်ပါ . မင်အမဲရောင်ခဲနေပြီဆိုရင် ဆက်မသုံးပါနဲ့ . လှုပ်လိုက်လို့ အရေက တစ်ခြားဆေးရည်တွေလို လှုပ်လိုက်တာနဲ့ အိုကေတယ်ဆို ဆက်သုံးပါ မင်ခဲတော့မယ်ဆိုတာနဲ့ လှုပ်လိုက်ရင် ကော်ရည်မဖြစ်တဖြစ်လို သိပ်ပြီးတော့ မလှုပ်တော့ပါဘူး . နဲနဲပျစ်သွားတယ် . အဲ့လိုဆိုရင် မင်အမဲကို ဆေးထိုးအပ်စလင်းနဲ့ စုပ်ထုတ်လိုက်ပြီးရေနဲ့ဆေးလိုက်ပါ . ရေကိုအခြောက်ခံပြီး အားလုံးအိုကေပြီဆိုမှ မပျစ်တဲ့ဆေးရည် (ဆေးရည်အကောင်း)ကို စလင်းနဲ့စုပ်ပြီး catridge ထဲကိုထည့်ပါ . ဒါကကြုံတုန်းလေးပြောပြတာပါ . printer ကို ၀ယ်တော့မယ်ဆိုရင် . (ဆေးရည်ဝယ်တော့မယ်ဆိုရင် အမဲရောင်ကို လှုပ်ကြည့်ပါ အရည်က ကျဲနေမှသာဝယ်ပါ . ဆိုင်မှာထားထားလို့ ကြာလာရင် ပျစ်နေရင် မ၀ယ်ပါနဲ့ .. အဲ့တော့ ဆေးရည်ဝယ်မယ်ဆိုရင် မ၀ယ်ခင် နဲနဲလောက်လှုပ်ကြည့်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့ .)all in one ကို ဘယ်တော့မှ မ၀ယ်ပါနဲ့ One way ကိုပဲသုံးပါ (သဘောက print ထုတ်ဖို့အတွက်ပဲ သီးသန့်ထုတ်ထားတဲ့ printer မျိုးကိုသုံးပါ)scanner ကိုဝယ်တော့မယ်ဆိုရင်လဲ scan ဖတ်ဖို့ တစ်ခုတည်းထုတ်ထားတဲ့ scanner ကိုပဲ ၀ယ်ပါ .all in one က ခဏတဖြုတ်အဆင်ပြေပေမယ့် ရည်ရှည်မှာဆိုရင် သူ့ရဲ့ Out put quality က one way တွေလို မမီပါဘူး . နောက်ဆုံးပြောပြချင်တာက မသူသူရေ . မသူသူ printer အတွက်တော့ resetter က software ရှာမတွေ့ဘူး . သူ့အတွက် cartridges auto resetter တစ်ခါတည်းပါတဲ့ ဆေးဗူး4ဗူးတွဲ ရှိပါတယ် . အဲ့ဒီ့ဆေးဗူးကို ၀ယ်လိုက် . ရန်ကုန်မှာပေါပါတယ် . အဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် . အကောင်းဆုံး နှင့် သုံးလို့အဆင်ပြေဆုံး printer ကို ညွှန်းပါဆိုရင်တော့ Epson R?? အမျိုးအစားတွေက အကောင်းဆုံးပါပဲ . ရုပ်ထွက် အဆင်ပြေသလို သူ့ရဲ့ error ကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရတာလဲ လွယ်ကူတယ် . နောက်ကြုံမှ printer တစ်လုံးကို ထိန်းသိမ်းနည်းဆိုပြီး ရေးပေးပါဦးမယ် . ရေးပေးချင်တာတွေကများပြီး အချိန်က သိပ်မရဖြစ်နေတာ . တစ်ချို့ကတော့ အကူအညီကတော့ အချိန်တိုင်းတောင်းနေတယ် . ကျွန်တော့်ပို့စ်များကို ကူးယူဖို့အတွက် ကျွန်တော့်ဆီက ခွင့်ပြုချက်မယူလဲ စိတ်မဆိုးပါဘူး . ကျွန်တော့်တို့ မြန်မာတွေမှာ တစ်ခုတော့ကောင်းတယ် . တစ်ယောက်ကသာ ရှေ့ကနေ လမ်းဖောက်ပေးလိုက် အနောက်ကနေ သိပ်မကြာဘူး လိုက်လာကြတယ် . အခုလဲကြည့် မြန်မာ ၀ဘ်ဆိုက်တွေ တစ်ဟုန်ထိုး တိုးတက်လာကြတာ ၀မ်းသာစရာပါ . အဲ့ဒီ့အတွက် ရှေ့ဆုံးကနေ လမ်းပြခဲ့တဲ့ လူတွေကို ရင်ထဲကနေ ကျေးဇူးတင်သင့်တယ် . တစ်ချို့က ဇော်ဂျီဖောင့်က စံမဖြစ်ဘူး . ဘာဖြစ်တယ် ဘာဖြစ်တယ်လုပ်ကြတယ် . ကျွန်တော့်အနေနဲ့ အဲ့လို စံဖြစ်တာ မဖြစ်တာကို ဘေးမှာထားပြီး ကျေးဇူးတင်တာက ဇော်ဂျီနဲ့ ၀ဘ်ဆိုက်တွေစရေးတယ် . ဇော်ဂျီနဲ့အပြိုင် တစ်ခြားဖောင့်တွေပေါ်လာတယ် . အဲ့ဒါဘာ့ကြောင့်လဲ မခံချင်စိတ် အပြင် ရှေ့ကလုပ်တဲ့သူထက် ပိုကောင်းရမယ် ပိုအဆင့်မြင့်ရမယ်ဆိုတဲ့ ခံယူချက်ပဲ. အဲ့ဒါကြောင့်မို့ ပိုပြီးတိုးတက်လာတယ်လို့ ကျွန်တော်တော့ ခံယူတယ် . ဘယ်လိုပဲပြောပြော ကျွန်တော့်အမြင်ကတော့ ၀ဘ်ဆိုက်တွေမှာ ကနဦးစပြီးရေးလို့ရအောင် လမ်းကြောင်းပေးခဲ့တာ ဇော်ဂျီပါ . တစ်ခြားစံဖြစ်တယ် မဖြစ်တယ်ဆိုတာက တစ်ဖြည်းဖြည်းချင်း ပြောင်းလဲယူလို့ရပါတယ် . လူငယ်တွေ ၀ဘ်ဆိုက်တွေ ရေးချင်လာအောင်၊ မြန်မာစာနဲ့ ဖတ်လို့ရလာအောင် စပြီးဆွဲဆောင်ခဲ့တာ ဇော်ဂျီပါ . ကျွန်တော့်ရင်ထဲကနေ နှစ်နှစ်ကာကာကျေးဇူးတင်ပါတယ် . Read More
အောက်မှာ Download လုပ်ယူလိုက်ပါ . . Download rapidshare ၊ Download ifile.it ၊ Download mediafire
ဒါလေးကလဲ ကောင်းတာပဲနော် .. လန်းတာလေးတွေ ပါပဲ . စမ်းကြည့်လိုက်ပါဦး . ထုံးစံအတိုင်း နှစ်နေရာကနေ တင်ပေးထား ပါတယ် . လှလှလေးတွေချည်းပါပဲ .Download mediafire ၊ Download ifile.it
ကဲဒါလေးကလဲ လှပါတယ် . Frame လှလှလေးတွေပါပဲ . အဆင်ပြေကြ လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် . အားလုံးကို မတင်ပေးပဲ ခွဲခွဲပြီးတင် ပေးတာကတော့ Downlaod လုပ်တဲ့သူတွေ အဆင်ပြေစေ ဖို့အတွက်ပါ .Download ifile.it ၊ Download mediafire
မှတ်ချက် ။ ။ ဒါက အပိုင်း(၄)ပိုင်း အားလုံး Download လုပ်ပြီးမှ ဖြေရမှာ မဟုတ်ပါဘူး . . တစ်ပိုင်း Download ပြီးတိုင်း တစ်ပိုင်းကို ဖြေလို့ရပါတယ် . Downlaod mediafire ၊ Download ifile.it
မှတ်ချက် ။ ။ ဒါက အပိုင်း(၄)ပိုင်း အားလုံး Download လုပ်ပြီးမှ ဖြေရမှာ မဟုတ်ပါဘူး . . တစ်ပိုင်း Download ပြီးတိုင်း တစ်ပိုင်းကို ဖြေလို့ရပါတယ် . Download mediafire ၊ Download ifile.it
မှတ်ချက် ။ ။ ဒါက အပိုင်း(၄)ပိုင်း အားလုံး Download လုပ်ပြီးမှ ဖြေရမှာ မဟုတ်ပါဘူး . . တစ်ပိုင်း Download ပြီးတိုင်း တစ်ပိုင်းကို ဖြေလို့ရပါတယ် . Download ifile.it ၊ Download mediafire ၊ Download rapidshare Read More
မှတ်ချက် ။ ။ ဒါက အပိုင်း(4)ပိုင်း အားလုံး Download လုပ်ပြီးမှ ဖြေရမှာ မဟုတ်ပါဘူး . . တစ်ပိုင်း Download ပြီးတိုင်း တစ်ပိုင်းကို ဖြေလို့ရပါတယ် . Download rapidshare ၊ Download ifile.it ၊ Download mediafire
မှတ်ချက် ။ ။ ဒါက အပိုင်း(၄)ပိုင်း အားလုံး Download လုပ်ပြီးမှ ဖြေရမှာ မဟုတ်ပါဘူး . . တစ်ပိုင်း Download ပြီးတိုင်း တစ်ပိုင်းကို ဖြေလို့ရပါတယ် . Download rapidshare ၊ Download ifile.it ၊ Download mediafire
ဒါကတော့ photoshop ဓါတ်ပုံကို ဘောင်ကွပ်ဖို့ အတွက် Frame လှလှလေးတွေပါ . နံပါတ်စဉ်အလိုက် စုစည်း ပေးထားပါတယ် .မှတ်ချက် ။ ။ ဒါက အပိုင်း(၃)ပိုင်း အားလုံး Download လုပ်ပြီးမှ ဖြေရမှာ မဟုတ်ပါဘူး . . တစ်ပိုင်း Download ပြီးတိုင်း တစ်ပိုင်းကို ဖြေလို့ရပါတယ် . Download rapidshare ၊ Download ifile.it ၊ Download mediafire
ဒါကတော့ နောက်ဆုံးထွက် version 9.5 ပါ . အဆင်ပြေ ကြမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် . လိုချင်တဲ့သူများ error နှင့် မကင်းကြသူများ အောက်မှာ Download လုပ်ယူနိုင် ကြပါတယ် . Download rapidshare ၊ Download mediafire ၊ Download multiupload
ဒီလို photoshop effect မျိုးကို microsoft ရဲ့ နောက်ထွက်တဲ့ OS တွေမှာ အသုံးများပါတယ် . မြင်ဖူးပြီးသား မျက်စိယဉ်ပြီးသား ဖြစ်မှာပါ . window xp, vista,7မှာဆိုရင် ဒီလို ဒီဇိုင်းမျိုးတွေ အတော် သုံးထားပါတယ် . စိတ်ဝင်စားတယ် ဆိုရင်တော့ အောက်မှာ ထုံးစံအတိုင်း Download လုပ်လိုက်ပါ . Download ifile.it ၊ Download mediafire
ဒီ brush လေးကလဲ အတော် သဘောကျစရာ ကောင်းပါတယ် . အဆင်ပြေကြလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ် . အောက်မှာ Download လုပ်ကြပါ .Download ifile.it ၊ Download mediafire
ဒါကတော့ ငှက်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ brush တွေကို ပေါင်းထားတာပါ . နောက်ပိုင်းကျွန်တော် ဓါတ်ပုံတွေနဲ့ အခြားအရာတွေကို photoshop brush ရလာအောင် ဘယ်လို လုပ်ရတယ်ဆိုတဲ့ ပို့စ်ကို ရေးပေးပါဦးမယ် . အခုတော့ နေသိပ်မကောင်း သေးလို့ တစ်အားကြီး အားမစိုက်နိုင်သေး လို့ပါ . Download ifile.it ၊ Download mediafire